Bosnia Sy Herzegovina : Takian’ireo Mpanao Hetsipanoherana Ny Rariny Ho An’ireo Fahafatesana Roa Tsy voavaha · Global Voices teny Malagasy
Bosnia Sy Herzegovina : Takian'ireo Mpanao Hetsipanoherana Ny Rariny Ho An'ireo Fahafatesana Roa Tsy voavaha
Voadika ny 19 Jona 2018 6:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, ਪੰਜਾਬੀ, English
Fifantohan-tsaina Iraisam-pirenena momba ny “Ny rariny ho an'i David sy Dženan”: ireo mpandray anjara tamin'ny Fihaonambe POINT momba ny andraikitry ny politika sy ny teknolojia vaovao tany Saraje maty novonoina (17.05.2018). Sary avy amin'i Vanja Čerimagić, nahazoana alàlana.
Izy ity dia lahatsoratra iray nadika malalaka sy navaozin'ilay mpanoratra azy ihany ary navoaka tao amin'ny NewsMavens.
Nolazaina fa tsy nampoizina ny fahafatesan'i David Dragičević tao Banja Luka, ilay renivohitra tsy ôfisialin'ny Repoblikan'i Srpska (vondrona ara-dalàna miaraka amin'i Bosnia sy Herzegovina-BIH), saingy ny hadisoan-dàlan'ny mpitandro filaminana sy ny tsy fisian'ny mangarahara dia nitarika hetsi-panoherana izay nitakian'ireo mpanohitra tafavory ny hisian'ny fanadihadiana vaovao sy mivelatra kokoa avy amin'ny governemanta.
Tsy hita nanomboka tamin'ny 18 Martsa 2018 i Dragičević, 21 taona. Hita natsipin'ny rano teny amoron-drano iray tany Banja Luke ny vatany enina andro taty aoriana. Taorian'ny fahafatesany dia mifanohitra ireo fanambarana nataon'ny mpitandro filaminana ka nisintona fehin-kevitra izay nitarika ny ray aman-drenin'i Dragičević sy ireo maro hafa hino fa novonoina izy.
Ny fikambanan'ireo Sosialy Demokraty tsy miankina sy ny mpitarika azy Milorad Dodik no nitondra ny Repoblikan'i Srpska tamin'ny fomba jadona nandritra ny folo taona mahery, tamin'ny fametrahana ny paikady mahazatra hamahana ny olan'ny fifandirana. Ny fihetsiky ry zareo tamin'ilay hetsi-panoherana dia halefa mandrakariva amin'ny haino aman-jery mpanohana ny governemanta, izay nanambara fa nahodina ho fitaovana ara-politika ny antony nanaovana ilay hetsi-panoherana. Amin'ny ankapobeny, ireo fanambarana ireo dia ampiarahana amin'ny filazàna fa ” sampam-pitsikilovana sy mpisehatra iraisam-pirenena” no miezaka manongana an'i Dodik sy ny governemantany amin'ny fampiasàna ireo mpanao hetsi-panoherana ho toy ny saribakoly tsy dia ahiahiana loatra.
Zavatra sahala amin'izay no nitranga tamin'ny iray volana lasa, rehefa andro iray talohan'ilay hetsi-panoherana lehibe, nambara hatao ny 21 Aprily, navoakan'ilay gazetiboky kely avy any Serbia ny lahatsoratra iray milaza fanambaràna tahaka izany izay vetivety dia niparitaka nanerana ireo haino aman-jery maro mpampahalàla vaovao tany amin'ny Repoblikan'i Srpska. Taloha, fihetsika tahaka izany no matetika voaporofo fa mahomby.
Tamin'ity indray mitoraka ity anefa, dia tsy noraharahian'ireo mpanao fihetsiketsehana nitaky ny fanadihadiana vaovao momba ny fahafatesan'i David Dragičević loatra ny fomba fanintonan'ny haino aman-jery tantànan'ny governemanta. Tamin'ny 21 aprily, tsy tambo isaina ry zareo no tafavory, teo ho eo amin'ny 10.000 ireo mpandray anjara nanatrika. Omen'ity lahatsary manaraka ity ny fijery an'habakabak'ilay zava-nisy :
Mieli-patrana ao anaty sy ivelan'ny aterineto sy ny teny faneva hoe ” Ny rariny ho an'i David “. Nahatarika mpikambana maherin'ny 323.000 avy amin'ny faritra rehetra ilay vondrona ao amin'ny Facebook mitovy anarana aminy ( “Pravda za Davida” amin'ny teny Bosniaka/ Kroaty/Serba). Amin'ireo herinandro ho avy, dia hiparitaka any amin'ireo faritra ivelan'i Banja Luka ilay hotakotaka.
Taorian'ny tsy fahombiazan'ireo haino aman-jery mpampita vaovao tamin'ny fiezahany hamaritra ilay hetsi-panoherana ho fikomiana, dia nandrahona ny hanenjika ny rain'i Dragičević ny Minisitry ny atitany noho ny fiampangany ny mpitandro filaminana ho nanafin-javatra, hetsika izay voararan'ny lalàna mazava tsara ary tsy azon'ny olom-panjakàna atao.
Nanomboka nikarakara hetsika ho fanohanana an'i Dragičević ireo vondrona maro ao an-toerana sy any amin'ny faritra any amin'ny tanàna bosniaka maro sy ireo any am-pielezana. Ohatra, ireo mpikambana 1.300 amin'ny “Pravda za Davida – Kozarska Dubica” dia avy any Dubica, tanàna misy mponina 23.000. Ny hetsika tamin'ny aterineto no niteraka ny fahafenoan'ny toerana, tahaka ilay iray tamin'ny 8 May tany Modriča, toerana malalaka fivoriana mitovy habe amin'ny an'i Dubica, araka izay hita amin'ity lahatsary manaraka ity. Mijoro mangina ireo mpanao fihetsiketsehana ary manao ilay fihesika ahafantarana ny rain'i Dragičević amin'ny fananganana ny totohondry havanana.
Mitaky ny rariny ho an'ny tranga famonoana tanora iray, i Dženan Memić, avy any Sarajevo, renivohitr'i BIH ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana. Nolazaina tany am-boalohany fa lozam-pifamoivoizana no nahafaty azy tamin'ny febroary 2016 ka nitarika ireo fianakaviany ho amin'ny ady mahatrotraka mba hamoahana ny marina. Hetsi-panoherana maro ho fanohanana ny fianakavian'i Memić no natao tao amin'ny kianja any Sarajevo nandritra ireo roa taona lasa. Natao tamin'ny 16 May lasa teo ny farany ary nampiarahana tamin'ny an'ny rain'i David Dagičević, teo ambany teny faneva ” Ny rariny ho an'i Dženan sy i David “.
Pravda za Davida, Do kraja, Ne idemo nikud odavde, Ostajemo ovdje! pic.twitter.com/cEA9eVqQBe
— AleksandarTrifunović (@AlexandarT) May 22, 2018
Ny rariny ho an'i David ; Hatramin'ny farany ; Tsy ho aiza tsy ho aiza izahay ; Hijanona eto izahay !
Anatiin'ny taom-pifidianana iray any Bosnia, avo be ny fanamby satria nampangaina ho manao “fitaovana politika” ireo mpanao fihetsiketsehana. Nofintinin'ilay mpanao gazety, Tanja Topić, izay manoratra ho an'ny gazety mpiseho isan-kerinandro any Belgrade Vreme tamin'ny 17 May, ny maha-zava-dehibe ilay hetsi-panoherana :
“Pravda za Davida” potpuno je novo i drugačije kolektivno ponašanje i teško je predvideti kako će se stvari dalje odvijati. Na velikom protestu, koji je održan 21. aprila ove godine, bilo je prisutno više građana nego zajedno na mitingu i kontramitingu, koji su pre dvije godine upriličili vlast i opozicija u Banjaluci. Tu su građani iz cele BIH zatražili da se sem pravde za Davida, razreše i sva do sada nerazjašnjena ubistva. Na okupljanjima na banjalučkom trgu izbrisane su sve etničke i verske podele među ljudima, što vladajućim etnonacionalistima predstavlja ozbiljan kamen u cipeli koji ih žulja.
“Ny rariny ho an'i David” dia fihetsika iombonana tena vaovao be sady hafa tanteraka ary sarotra ny maminavina izay ho fizotry ny hetsika. Tamin'ilay hetsika lehibe natao tamin'ny 21 aprily tamin'ity taona ity, betsaka lavitra ny mponina nandray anajara raha mitaha amin'ireo mpandray anjara tamin'ilay fivoriana lehibe nokarakarain'ny governemanta sy ny mpanohitra tany Banja Luka roa taona lasa. Notakian'ireo mponina avy any Bosnia sy Herzgovina iray manontolo izay mitaky ny rariny ho an'i David ihany koa ny famahana ny olan'ireo vono olona hafa mbola tsy voavaha. Voafafa tamin'ilay famoriam-bahoaka tao amin'ny kianjan'i Banja Luka avokoa ny fizarazaràna ara-poko sy ara-pivavahana teo amin'ireo mponina, ka niteraka olana iray manokana ho an'ireo nasionalista mpankasitraka ny fizarazarana ara-poko ao amin'ny fitondrana.
Okraina 3 andro izay
Diaspora avy ao Bosnia & Herzegovina : Manjavozavo ny fijery ny tokantrano sy ny tanindrazana
Bosnia Herzegovina 3 andro izay
Rosia 4 andro izay